Henakisoa sy anamadinika na anatsinahy na anatsipolitra
par Tatiana Razanadraibe	 28 juin 2018 2 commentaires
Sakafo ankafizin’ny malagasy maro ny henakisoa sy anamadinika na anatsinahy. Ireto misy fomba maromaro andrahoana azy mba hampafilotra azy kokoa.
Fomba voalohany fandrahoana Henakisoa sy anamadinika
Fomba faharoa fandrahoana Henakisoa sy anamadinika
Fomba fitehirizana anatsinahy
Mampangotraka rano ka rehefa mangotraka dia alefako ao ny anamadinika na anatsinahy, dia lomako ao, saromana. Avelako ao maharitraritra. Mifitsaka ny anana, mivalomainty ny rano dia tatavanina, ariana ilay rano.
Endasiko amin’ilay vilany tena handrahoina ilay laoka ny henakisoa matavy voatetika efa nasiana sira. Rehefa mendy tsara dia arotsako ny tongologasy sy tongolobe voatetika.
Arotsako tsikelikely ao koa avy eo ilay anana izay efa voatsiaka tsara tsy misy ranony intsony.
Ampiana sira kely ka fangaro tsara hiparitaka ny tsiro sy hanitra.
Tsy asiako rano intsony fa menaka kely no hanampiako azy raha toa ka ilaina.
Nanolotra : Tiana rakotoniaina (Rinanto Tiana)
Rehefa voasasa sy voatetika arak’zay habeny hitiavako azy ny henakisoa dia harotsako anaty vilany (tsotra fa tsy « cocotte minute ») ary teneniko amin’ny ranotsasany(hoy isika Malagasy) iny.
Rehefa ritra sy mendy menafify dia harotsako ny saosy (voatabia sy tongolo be sy tongolo gasy efa voaendy) ary asiako rano maha masaka ny hena. Etsy ankilan’izay Rehefa voatango sy voadio ny anamadinika dia harotsako anaty vilany(ranotsasany ihany koa)dia teneniko eo.
Rehefa mangotraka elaela dia tsihifiko(hariako ny rano nampangotraka azy iny)ary dia harotsako anatin’lay vilany misy ny henakisoa teo. Miara tanehiko amin’zay ny fangaro ka rehefa malemy ny hena ,ny anana koa malemy tsara efa lasa maintimainty ary ritra tsara dia masaka izy zay.
Manapoka menaka tsikelikely aho eny antenatenany arak’zay hitiavako azy raha toa ka tsy ampy Satria izaho/izahay tsy mihinana hena matavy loatra fa nofonofony foana no hampiasaina.
Nanolotra : Nina Rasoanaivo.
Henakisoa sy anamadinika
Raha anana maina no ampiasaiano dia mila alona iray alina manontolo vao azo ampiasaina.
Rehefa menafify ny henakisoa dia asiana tongolo gasy sy tongolo egypt dia avy eo tonga dia anana.
Tsy mampiakatra tosidra n’y anatsipolitra fa mampidina !
Mety koa raha henan’omby matavy (Trafon-kena na vodihena misy taviny mavo tsara miraikitra amin’ny nofony ireny) no atao solon’ny henakisoa. Fa ny jabora kosa aloha toa tsy mety fa mandry am-bava.
Ny tsivadrenikely koa mbola matsiro lavitra noho ny anatsinahy, sady manitra aok’izany ny fofony! Anan-jazavavy koa no ailazàn’ny sasany azy. Raha sendra tsy mahita anatsinahy dia azo asolo azy tsara io! Fa ny tsy itovizany indray dia tsy mila arian-drano izy satria tsy mangidy.
Ampangotrahina ny anatsinahy , rehefa izay dia arotsaka anatin’ny fitaovana fitatavanina na « passoire » mba hitsiaka ny rano sy hangatsiaka ilay anana .
Maka « sachet de congelation » maromaro ary dia zaraina araka izay mety ilaina isaky ny mahandro ny anana efa mangatsiaka. Tehirizina ao anaty « congelateur » ka maka iray isaky ny fotoana ilana azy !
Tsy sahy mitahiry mihoatry ny enim-bolana anefa izahay hatreto sao dia misy akony ratsy amin’ny fahasalamana. Tsy miova ny tsirony fa mety maro kosa aloha ireo singa mahavelona mety ho levona fa tsy mahatanty ilay hatsiaka be.
Nanolotra: Alberto manitra
Recette de henakisoa sy voanjobory ary saosisy – Pois bambara à la viande de porc
Mba lazao hoe ny fahandronareo ny anareo fa mety betsaka no ho liana.
anamadinika sy henakisoa, Anan-jazavavy, anatsipolitra, fitehirizana anana, henakisoa sy anatsinahy, tsivadrenikely
Article précédent : Roadtrip à Madagascar : partez à la découverte
Flan pâtissier fait maisonArticle suivant :
0 commentaire sur “Henakisoa sy anamadinika na anatsinahy na anatsipolitra”
30 juin 2018 à 13 h 37 min
Dina Ralijaona dit :
27 mai 2021 à 20 h 24 min
Merci fa tena matsiro
odilon dans EFTA 2019 : Concours d’entrée en première année dans les Ecoles de Formation de Technicien Agricole